राजन भट्टराईको नालीबेली उत्रियो ! 'सुरक्षा सूचना बेचेर बंगला जोडेको आरोप'
काठमाडौं,१८ मंसिर । काठमाडौं क्षेत्र नं ४का उम्मेदवार राजन भट्टराईले देशको महत्वपूर्ण सूचना बेचेर ललितपुरको धापाखेलमा आलिसान महल किनेको खुलासा भएको छ । आँफू काठमाडौं ४ को बासिन्दा भएको दाबी गर्दै आएका राजन त्यहाँबाट बसाई सरेर ललितपुर धापाखेलमा सिभिल होमले बनाएको क्लोनीमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
सिभिल होमको ललितपुर धापाखेलमा रहेको कोलनी राजन भट्टराईको हो । भारतीय दुतावासको कोटामा जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका भट्टराईले भारत लगायतका मुलुकमा सूचना बेच्ने धन्दा गर्दै आएको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ बुलबुलेमा बस्दै आएका भट्टराई ललितपुरको सिभिल होममा घर किनेपछि उतै सरेका थिए । यो बसाई सराईसँगै राजन भट्टराईको नालीबेली झन् उदांगिएको हो । उनलाई सुरक्षा सूचना बेचेर बंगला जोडेको आरोप समेत निकटकाले लाउने गरेकाछन् ।
भट्टराइकी श्रीमति र बालबच्चा अहिले पनि धापाखेलमै बस्छन् । सांसद हुँदासम्म विकासका काममा कुनै चासो नदिएका राजनले अहिले चुनाबी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी सांसदलेकाम नगरेको आलोचना गर्दै आएका छन् । निर्माणाधिन चावहिलको सडकले गिज्याइरहेको बताउँदै आएका राजन आँफू भने उच्च व्यवसायिक घरानाहरु बस्नेसिभिल होमको आलिसान महलमा बस्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको छवी उदांगो भएको छ ।
उनले यो घर खरिद गर्न पैसा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सूचना विदेशी निकायलाई बेचेर कमाएका आरोप छ । ती बाहेक घर किन्ने समयमा यी भारतीय दुतावास र मेडिकल माफियासँग समेत राम्रै सहयोग लिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
निप्सले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धि परियोजनाका लागि तीन करोड ४२ लाख ६१ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो ।
त्यतीबेलाका केही प्रतिष्ठीत संचार माध्यमहरुले पनि विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पदिय जिम्मेबारीको दुरुपयोग गरेर संवेदनशील सुचना विदेशीलाई चुहाएको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए । सो विषयमा बिबिसी नेपाली सेवाले समेत प्रश्न गर्दा भट्टराई नाजवाफ भएका थिए । एमालेका नेता भट्टराईले महिनामा दुई पटक लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासबाट पनि तलव बुझ्ने गरेको एमालेका नेताहरूकै आरोप छ ।
भारतीय दूतावास उच्च स्रोतले पनि भट्टराई बेलाबेला दूतावासमा आउने गरेको स्विकारेको छ । सो डा भट्टराई भारतीय दूतावासको सहयोगमा नयाँदिल्लीस्थित जहवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एस.डी. मुनी र महेन्द्र पी. लामाको विद्यार्थी भएर अध्ययन गरेका हुन् । उनैले अहिले आफुलाई भारतको कट्टर विरोधी र असली राष्ट्रवादी भनाउने गरेका छन् ।
नेपाल–भारत बौद्धिक समूहका सदस्य समेत रहेका एमालेका नेता भट्टराईले सो समितिका सदस्य एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशिहारी र प्रध्यापक महेन्द्र पी. लाम्पासँग ठाडो नजर गरेर हेर्न समेत सक्दैनन् । आफ्ना गुरुद्धय मुनी र लाम्पाको जुनसुकै प्रस्तावलाई अस्विकार गर्न नसक्ने भएकाले भट्टराईको उपस्थीति समितिमा नाम मात्रको भएको एक सदस्यले बताएका छन् ।